STEP Democracy | MyVote - STEP Democracy Voter Education TV series on DVB TV Channel - Episode (2)
MyVote - STEP Democracy Voter Education TV series on DVB TV Channel - Episode (2)
My Vote အစီအစဉ်ကတော့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဆန္ဒမဲပေးကြမယ့် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ မဲပေးကြမလဲ၊ ဘာကြောင့်မဲပေးရမလဲဆိုတဲ့စတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကို ဥရောပသမဂ္ဂ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့်ဆောင်ရွက်သော STEP Democracy မှ DVB သတင်းဌာနဖြင့် ပူးပေါင်း၍ အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့် တင်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတင်ဆက်မှု ဒုတိယအစီစဉ်မှာဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌမှ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအတွက် သတင်းစကားပါးတဲ့ အကြောင်းအရာ၊ မွန်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ဒီမိုကရေစီအရေး အပေါ်မှာ ပြောဆိုချက် နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ လဖက်ရည်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်လည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
The EU-funded STEP Democracy program is producingaTV series “My Vote”,avoter education program for the 2020 general election, in collaboration with DVB. The episode (2) broadcast contains an address by the Union Election Commission Chairman to voters,amini-documentary withayoung woman from an ethnic minority in Mon, highlights STEP work on election observation by democracy reporting international (DRI) anda‘tea talk’ discussion with local CSOs on election observation. www.stepdemocracy.eu